Isbedelada ugu muhiimsan ee qaabeynta sawirada sanadka 2018 | Abuurista khadka tooska ah
Melissa Perrotta | | Design Graphic
Labo todobaad ayaa naga xigta inaan dhameystirno sanadkan 2017 oo sanadka cusub cagihiisa ku taagan yihiin, waxaan kuu sheegaynaa waxa isbeddellada cusub ee naqshadeynta garaafka in aan arki doono.
Caadi ahaan, isbeddellada ayaa ah fikrad aad u qoto dheer oo ku soo marta isbeddelo si wareeg ah oo dhaqso leh. Dareenkan, isbeddellada aan aragnay labadii sano ee la soo dhaafay waxay si dhaqso leh ugu libdhi doonaan wajiga qaabab ka buuxa tijaabo iyo ciyaar.
1 Dhibaatooyinka cilladda
2 Saamaynta burburay
3 Duo tone laba jeer soo-gaadhis
4 Saamaynta kanaalka midabka
5 Meel xun iyo qaab qorid taban
6 Sawirada farshaxanka
7 Nooca wax walba
8 Midabyo dhalaalaya
Tilmaamaha koowaad ee sanadka soo socda. Saamaynta cilladda ayaa had iyo jeer loo arkaa inay dhibaato ku tahay daawadayaasha. Tani waa sababta oo ah waxay ka timaaddaa khaladaadka aan loo baahnayn ee ka socda softiweerka inta lagu jiro khalkhalgelinta sawirrada. Si kastaba ha noqotee, sannadkan waxaan baran doonnaa inaan u adeegsanno sawirrada kharribmay adoo siinaya iyaga dareen cusub oo bilic leh.
Haddii 2017 ay raadineysay inay ahaato mid nadiif ah, nadiif ah oo baashaal ah sanadka soo socda waxay noqon doontaa diidmada. Tani waa sida aan u arki doonno isbeddelkan cusub ee ku soo dhowaanaya gacanta farshaxanka casriga ah. Sidaas awgeed, waxaan aakhirka heli doonnaa suurtagalnimada ku-noqoshada jeexjeexay, buufiyay, jeexjeexay, dhibco midab leh iyo kolajiin ugu dambayntiina aqbalaad wanaagsan.
Duo tone laba jeer soo-gaadhis
La isbeddelka ayaa noqon doona jilaa sanadka soo socda. Waxaan ilaalin doonaa midabada labada xiddig ee xiddigta u ahayd sanadkii tagay. Waxaan si fudud hada ugu dari doonnaa laba jibaar muuqaalka sawirada si aan u abuurno muuqaal dhalanteed iyo dhalanrog badan.
Saameyntan waxaa lagu helaa iyadoo la sawirayo sawirka ama la adeegsanayo laba sawir oo is dul saaran oo midab kala duwan leh mid kasta oo midabkiisu yahay monochrome.
Saamaynta kanaalka midabka
Wax ka qabashada sawirka sawirka wuxuu noqonayaa mid ka mid ah isbedelada ugu waa weyn ee sanadka cusub. Tani waa sida aan ugu ogolaan karno nafteena inaan ku ciyaarno sawirada oo aan iyaga siino dareen qurxan oo cusub oo ay soo saaraan saamaynta dhalanteed.
Meel xun iyo qaab qorid taban
Marka taban uu noqdo mid togan waa marka isbeddelka runta ahi dhaco. Meel xun ayaa had iyo jeer dhib ahayd in lala shaqeeyo maxaa yeelay waxay u baahan tahay aqoon dheeri ah oo ku saabsan ifafaalaha fikirka leh. Tani waa sida walxaha hore waxay u dhaqaaqaan xagga hore iyo kuwa hore xagga dambe, labadaba qaabab iyo walxo iyo sawirro.
Sannadkan muujinta jimicsiga waxay qaadan doontaa xoog badan. Wax kasta oo la xiriira wax soo saarka gacanta sida sawirka iyo kolajka. Waan arki karnaa markaa Sawir gacmeed lagu qorey makiinad qorid, sawir qorid lagu qorey sawir, sawiro ay ku sawiran yihiin dushooda iyo iskudhafyo isku dhafan sawir, sawir iyo muuqaal.
Nooca wax walba
Qoraalku ugu dambeyntii wuxuu noqdaa xiddigga xisbiga, ka dib sannado sahamin ah. Gaar ahaan, waxaan arki doonaa diiradda tijaabo ama qaab abuur hal abuur leh kaas oo loo isticmaali karo iyadoo lala kaashanayo isbeddellada kor ku xusan. Sida muuqata waxaan dib ugu laaban doonnaa 90-meeyadii qormooyin ay soo saareen xarfaha waa la jaray, qasan, si caadi ah looma waafaqsana. Waxaan sidoo kale arki doonaa qorista qaab-dhismeedku inay noqdaan cunsurro saddex-cabbir leh.
Hal isbeddel oo sii wadi doona inuu noqdo midabyo dhalaalaya. Waxaa la adeegsan jiray ilaa dhamaadkii sanadkii hore waxaana la filayaa inay sii wadaan baahida inta lagu gudajiro sanadka 2019 sidoo kale. Hadda ah midabka midabka, iyadoo la adeegsanayo hooska si loo abuuro 3D, kala-guurka midabka, IWM
Sannadkan cusub waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku dhejino xooggeena hal-abuurka ah dhinacyo badan. Markaan u sii marno fikradaha sawir qaadista ee la dhexgalay, adeegsiga midabbada firfircoon, iyo isdhexgalka qaab qoraalka, waxaan arki doonnaa in xadka uu yahay mid cakiran oo ay jirto suurtagal weyn oo ah adeegsiga agabyada.
Halkan waxaad ku haysaa casharro loogu talagalay Crehana si loo gaaro qaar ka mid ah saameynta lagu xusay boostada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Isbedelada ugu muhiimsan ee naqshadeynta garaafka ee 2018